Gini kpatara eji enweta ugwo ogugu na 542 na Amazon | Martech Zone
Ihe kpatara E Ji nwee 542 Banana Hangers na Amazon
Onwere ogugu 542 di iche iche na Amazon… sitere na onu ahia site na $ 5.57 rue $ 384.23. Ndị na-adịghị ọnụ ọnụ hanga banana bụ nko dị mfe ị na-arịgo n'okpuru kabinet gị. Osisi banana kachasị oke ọnụ bụ nke a mara mma Chabatree banana hanga ejiri aka ya rụọ ya.
Serkè… M lere ha anya. Agụrụ m nsonaazụ ndị ahụ, hazie ha ọnụahịa, ma mezie ọtụtụ nke banana hanga nnyocha.
Ugbu a, ị na-ajụ… Kedu ihe nke a nwere na azụmaahịa azụmaahịa… ị gara unere? (Ee, ekwuru m ya!)
Mba, nke a bụ naanị edemede dị mfe na - ekwu maka ngwa ahịa, nhọrọ ngwaahịa na ghọtara uru - yana otu esi ere onwe gị, ngwaahịa gị na ọrụ gị. Ọ bụkwa otu, dị ka azụmahịa, ịkwesịrị ibute ụzọ ị na-achọ maka azịza gị ọzọ.
Otu ogwe unere nwere otu nzube na naanị otu nzube… kpọgidere unere ka ha ghara ịnọdụ ala n'elu ala ma merụchaa ngwa ngwa. N'ụzọ dị ịtụnanya, ndị patent dị ihe dị ka afọ iri abụọ. Akụkụ akụkụ… onye na-echepụta ihe Bruce Ancona mekwara ka patenti ejiri ya pat dị ka nwa okorobịa na-etinye oge dị ukwuu na kichin na-eche ebe ọ ga-etinye ihe. Laghachi na ndị na-egbu osisi banana, ọ bụ ezie na…
N'ime iri afọ abụọ gara aga, onye na-egbu banana amabeghị ihe ọhụụ karịa ka ọ dị na mgbe Bruce tinyere akwụkwọ ikike ahụ. Ngwunye banana ọ bụla n'ahịa nwere otu nzube… iji belata nchihịa banana gị. Ndị ọzọ okwu, na uru nke hanga agbanweghi. O mere ka unere gi jiri izu ole na ole karie afo iri abuo gara aga… ma mee ya ka o di otu taa.
Yabụ kedu ihe ndị mmadụ ga-eji kwụọ ụgwọ dị iche iche maka ha? Maka na onye ọ bụla na-azụ ahịa nwere uru ọ bara nke ahụ dị iche. Fọdụ ndị ga-achọ ka mma nke banana a na-adịghị ewe counter ohere, n'ihi ya, ha ga-akwụ ụgwọ maka n'okpuru-counter nlereanya. Ndị ọzọ ga-enwe ekele maka mgbakwunye efere maka mkpụrụ osisi ndị ọzọ. Ndị ọzọ ga-akwụ ụgwọ dabere na ihe ndị ahụ na ọ nwere ike ịbụ na ọ ga-adị mma n'ụlọ ha. Ma… ka, ndị ọzọ ga-akwụ $ 384.23 iji kwado ngwaahịa na-adigide na onye ọrụ aka mpaghara nke mebere nka maka kichin gị.
Ka ị na-eche maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, ị gaghị ewepụta ngwaahịa na-anaghị enye ndị ahịa gị uru ma ọ bụ pere mpe. Ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa ịghọta otu ha siri were ahia ma obu oru aka gi. Mgbe ụfọdụ, ịkwesịrị ịkụziri ha ihe iji nyere ha aka ịghọta ihe mere ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị nwere ike iji dị ọnụ (ma ọ bụ pere mpe) karịa ndị na-asọmpi gị. Onye ọ bụla na-eme ogwe banana dị iche iche.
Enwere m enyi m nke rụrụ ọrụ dị ka onye isi oche nke mmalite ọtụtụ afọ. Nchegbu ọ nọ na ya bụ nke a na-apụghị ịnagide. O nwere ndị na-etinye ego na-arụgide ya kwa ụbọchị, ndị ahịa na-agbanye atụmatụ ọhụrụ, ndị mmepe na-anakọta site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na ego ọ na-enweta dị egwu ka ọ na-anwa ijikọta akụkụ niile ma mepee ọhụụ ọhụụ. Azụmaahịa ya kụrụ afọ ka ego mechara gwụ ọ nweghị ike ịkwụ ụgwọ talent dị mkpa iji wepụta.
Mgbe ọtụtụ afọ gachara, ahụrụ m ya ị forụ kọfị ma jụọ ya ihe ọ na-eme ugbu a. Ọ zara na ya nwere ụlọọrụ na-akwọ ahịhịa. Ọ gbasaa site na ịkọ ahịhịa ahịhịa n'onwe ya wee na-agba ọsọ ọtụtụ ndị ọrụ. Ọ na-eme ọfụma, enweghị mgbakasị ahụ, na-arụ ọrụ n'èzí, ma hụ ya n'anya.
Akpata oyi wụrụ m inno si innovator na tech mmalite entrepreneur ka Lawn mowing?
Nzaghachi ya, ahịhịa na-eto.
Ọ na-eme nke ọma ugbu a ma azụmahịa ya na-aga n’ihu. N'agbanyeghị na aku na uba, na ulo oru mbo obodo, ọchịchị ụkpụrụ, na mpi grass ahịhịa na-eto eto na ọ bụ ike na-ewu na-eto eto (hehe) mmekọrịta ya dị ka ọ na-anapụta a àgwà ọrụ. Ọ dịghị ihe ọhụụ, naanị inye ọrụ siri ike na nsonaazụ ọma na nsogbu anyị nwere kemgbe otu narị afọ.
N'ezie, anyị na-arụ ọrụ na mbara igwe na-arụ ọrụ ebe ndị isi egwuregwu na-arụsi ọrụ ike iji nweta ma jikọta ngwaahịa na atụmatụ ọhụrụ, na atụmatụ ha bụ isi dị n'azụ ụlọ ọrụ ahụ. Ha na-elekwasị anya na ịmepụta ihe ọzọ na-esote iji kwalite ahịa, ebe ndị ahịa ha na-ahapụ ha maka ngwọta ka mma nke na, ọtụtụ mgbe, anaghị adị ọnụ ala.
Innovation abụghị ihe dị mkpa iji rụọ ọrụ azụmaahịa na-aga nke ọma.
Enwere ọtụtụ ndị na-etinye banana. Ọ bụ ezie na ụfọdụ kwụgidere na kọbọd, ụfọdụ etinyela efere mkpụrụ osisi, yana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile nwere ụdị ọdịdị dị iche… ha niile na-eme otu ihe ahụ. Ma, enwere ihe zuru ezu site n'aka ndị na-azụ ahịa na azụmahịa ndị a niile mara ahịa wee bido ire ngwọta ha n'ebe ahụ.
Ahia gi adighi iche. E nwere ngwaahịa na ọrụ ndị ọzọ na-asọ mpi nwere ike ime ihe ị na-eme. Ha nwedịrị ike ime ha ọfụma. Nke ahụ pụtara na, dị ka onye na-ere ahịa, ọ dị mkpa ka ị nwee ike ịkụziri ndị na-ege gị ntị ihe kpatara na ị dabara adaba maka ha. Ọ bụkwa ihe kpatara ya, dị ka ndị ahịa, ị ga-ahụrịrị na a ghọtara ikike gị na ụlọ ọrụ gị dị ka ndị na-azụ ahịa nyocha ikike azụmahịa gị iji wepụta ngwaahịa na azịza ndị ahụ.
Ihe dị iche na ma ndị mmadụ zụtara otu banana unere ma ọ bụ nke ọzọ na Amazon enweghị ihe ọ bụla jikọrọ ya na unere na-adị ọhụrụ na nke a na-emerụ emerụ… ha niile na-eme nke ahụ. Ihe dị iche bụ na ọkwa, nyocha, nkọwa na etu esi emepụta ngwaahịa a. Dịka onye na-azụ ahịa, nke ahụ bụ ebe ị ga - etinye oge gị - nke ọma marketing ngwaahịa na ọrụ gị… ogo, nyocha, nkọwa, yana imepụta ngwaahịa na ọrụ gị.
Mee oru di nma karie, i gha emekorita ndi ahia choro ahia na oru gi.
Ngwaahịa Ahịa Digital Digital
Na dijitalụ ahịa obodo, anyị nwere a jọgburu onwe àgwà nke mgbe niile na-achọ ọzọ ọlaọcha bullet n'elu ikpo okwu ma ọ bụ ọwa na-aga idozi nsogbu anyị niile. Mana ụfọdụ ụlọ ọrụ teknụzụ kacha baa uru na nnukwu ụlọ ọrụ anaghị emepụta ihe ọ bụla ma ọlị. Naanị ihe ha hụrụ bụ ọchịchọ ma mepụta ụzọ kachasị mma iji zụọ ahịa na ha bụ azịza kachasị mma maka uru kacha mma.
Nwere ike ịzụta akwụkwọ site na ebe ọ bụla, mana Amazon wepụrụ. Nwere ike ịzụta akpụkpọ ụkwụ site na ebe ọ bụla, mana Zappos gbapụrụ. Nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na ikpo okwu ọ bụla, mana WordPress kwụsịrị. Enwere m ike ịdepụta ọtụtụ narị ma ọ bụ puku kwuru atụ.
Anaghị m ekwupụta na ụlọ ọrụ ndị a abụghị ihe ọhụụ… M na-arụtụ aka na nsonaazụ ya bụ otu. Natara akwụkwọ, ị natara akpụkpọ ụkwụ, ma ọ bụ na ị na ulo oru a website. Ekwenyere m na olu, mmata, na uto bịara ahịa ha… naanị mgbe ahụ ka ha ga-enwe ike ịnweta ego iji tinye ego na ihe ọhụrụ.
Ahịa gị 'Uru na Innovation
Ka ị na-elebanye anya na ụlọ ọrụ gị, azịza ya nwere ike ọ gaghị abụ otu ị si eme ihe ọhụụ ma ọ bụ nye ọrụ asọmpi na-adịchaghị ọnụ.
Ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa nwere nsogbu ha na-eche ihu ụbọchị ọ bụla nke chọrọ naanị azịza maka. Ma ọ bụ nghọta ha unere, ma ọ bụ na-akpaghị aka ha ide, imewe, ihu ọma, na mbipụta usoro maka ọzọ ha ala. Nsogbu a di, obi nkoropụ ha adila, ma ha amatala uru osiri di.
Chọghị otu njirimara ọzọ, ọhụụ na-esote, ma ọ bụ ọnụahịa dị iche ma ọ bụrụ na ọchịchọ dị adị ma mara uru ahụ. Elekwasị anya gị na isi nsogbu gị ngwaahịa na ngwọta na-enye ihe ngwọta maka.
Innovation na Uru Ngwọta You're Na-achọ
Anyị na-arụ ọrụ na azụmaahịa ugbu a na - akpọ ngwaahịa ya naanị ụlọ ahịa mkpọsa. Site n'ọrịa ahụ, mkpọchi mkpọchi, na mkpọsa mkpọpụ ahịa na-esote, ha hụrụ na ọ dị ha mkpa itinye nhọrọ ọnụọgụ ecommerce ozugbo maka ndị ahịa. N'ịbụ ndị na-ejighị nkà na ụzụ mara nke ọma, ha nyochara ihe ngwọta wee malite ịgwa ndị nnọchi anya ahịa na ndị na-eweta azụmahịa dị iche iche okwu.
Mgbe ha lere ohere niile, ha wedara ya ala na ngwọta kacha mma n'ahịa. Ọ nwere ike ịba ụba na-enweghị atụ, nyere nkwado ọtụtụ asụsụ, nwee ọtụtụ njikọta, ụtụ isi ụtụ isi nke mba ụwa, nwee injin nwere AI, ma nwee ike ijikwa ọtụtụ nde mmadụ SKUs. E rere ha… njikere itinye ego ọtụtụ narị puku na ikikere na ọbụlagodi na ịchụ anyị n'ọrụ iji mejuputa azịza ya ma tinye ya na usoro azụmaahịa ụwa.
Anyị na ha kwurịtara banyere ya.
Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịbụ ihe ngwọta kachasị mma, kachasị ọhụụ na mbara ala, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eme ka ha nwee enweghị ego ma ọ bụ bụrụ afọ iri tupu ha ahụ nloghachi na itinye ego. Ha nwekwara naanị ngwaahịa 75 pit ntakịrị ego maka ikpo okwu ecommerce iji mee. Ha ga-eresị United States maka afọ mbụ ma ọ bụ karịa. Mgbọ ọlaọcha ahụ ga-egbu ha.
Ndụmọdụ anyị bụ, kama, itinye ego na nyocha na ịkọ aha, wee mejuputa azịza dị mfe, nke na-adịghị na shelf yana igwe eji akpaka azụmaahịa agbakwunyere ebe anyị nwere ike ilekwasị anya n'ịmụbawanye na ịre ahịa nke ngwaahịa ha. Naanị ihe ha chọrọ bụ olulu nke banana na-enweghị ihe ọzọ.
Ka ị na-achọ azụmaahịa gị, ịchọpụta isi ihe mgbu dị n'ime nzukọ gị ebe teknụzụ nwere ike inyere gị aka ịdị irè ma rụọ ọrụ nke ọma nwere ike ọ gaghị achọ ngwọta dị oke ọnụ ma ọ bụ nke ọhụụ. Ọ nwere ike ịbụ nyiwe ngwanrọ nke na-ewepụ, gbanwee, ma buru ibu data na-echekwa gị ọtụtụ awa nke ọrụ ndị ọzọ n'okporo ụzọ.
Mee otu nyocha ahụ na ndị ahịa gị… ebe bụ nkụda mmụọ ha na ọdịiche na otu ị si enwe ike ijere ha ozi ma debe ha obi ụtọ?
Azịza ya nwere ike ịbụ ma ọ dị ọnụ ala ma na enweghị ọrụ. E nwere ihe mere e nwere 542 banana hangers na Amazon… e nwere tọn ndị mmadụ na-azụ ha na a ụyọkọ nke ụlọ ọrụ na-eme nke ọma na-ezute chọrọ. Ọnụahịa ndị ahụ dịgasị iche dabere na uru onye ahịa na-ahụ.
Tags: amazonunerechi bananaghọtara urunhọrọ ngwaahịaihe ohurungwaahịa ahịannyocha ngwaahịaọnụahịa ngwaahịauru